Electric Ethanol Burner AF50 - Art-ọkụ
Ulo » Ngwaahịa » Electric Ethanol Burner AF50
Ojiji N'ime ụlọ nke opekempe 20 m2
Ibu ibu 18.00n'arọ
Mmanụ Oriri 0.4Liter / Oge Awa
Ogologo oku 334mm / 13.15inch
1.Remote Control ikike. N'ihi ọrụ kọmputa ya, kwadoro site na isi iyi ike iri na abụọ, this ethanol fireplace insert may be ignited and extinguished through an on/off switch located on the burner itself, a one-button remote control or through your smart phone by integrating with your Smart Home System.
2.Nlekọta Nchedo Nchebe Na-Board. Igwe na ebe nchekwa ọkụ a bụ nchekwa-etiti. Na-enyocha onwe ya mgbe niile, a nwere ọgụgụ isi burner mkpatụ na ọnọdụ ọ bụla na-egosi gbara gharịị. Should it sense an excess amount of carbon dioxide emission or heat output, ọ ga-akwụsị ọrụ ozugbo, extinguish the flame and maintain the lock mechanism of the fuel chamber. Additionally, it will self-extinguish should it sense seismic motion or level of tilt making it a shock-proof device. Fuel and battery levels are also constantly evaluated for optimal performance and will give notification through the burner’s LED display, which will indicate operation times and alert you by sound and error message should an event occur.
3.Nrụpụta siri ike. Wuru nke mezuwo 304 igwe anaghị agba nchara, the ethanol burner is corrosion resistant and exhibits excellent resistance to atmospheric, chemical na ihe ngosi ndị ọzọ. Elu ya dị elu dị na milimita atọ (3/32 sentimita asatọ). Nke a na-enye ohere sturdiness, ma na-akwalite obere profaịlụ. For added safety, the bio ethanol burner AF50 offers insulated double hearth construction.
A: Iji malite ọrụ gị, biko zitere anyị ihe osise eserese na ndepụta nke ihe, ibu na imecha. Mgbe ahụ, ị ga-enweta nkwupụta ahụ n'aka anyị n'ime 24 awa.
Q: Anyị amaghị ụgbọ njem mba ofesi, ị ga-emezi ihe niile eji eme ihe?
A: Kpamkpam. Ọtụtụ afọ ahụmahụ na ogologo oge na-arụkọ ọrụ forwarder ga-akwado anyị zuru ezu na ya. Nwere ike ịgwa anyị ụbọchị nnyefe, mgbe ahụ ị ga-enweta ngwongwo ahụ n'ọfịs / ụlọ. Nsogbu ndị ọzọ hapụrụ anyị.
Q:Gịnị bụ nkwa ahụ?